Ciidamada amaanka oo baaritaan guri guri bilaabay & dadwaynaha oo QAYLADHAAN hordhac ah u diray DF Somalia + Sawirro | Hadalsame Media
Home Wararka Ciidamada amaanka oo baaritaan guri guri bilaabay & dadwaynaha oo QAYLADHAAN hordhac...
Ciidamada amaanka oo baaritaan guri guri bilaabay & dadwaynaha oo QAYLADHAAN hordhac ah u diray DF Somalia + Sawirro
(Muqdisho) 01 Abriil 2019 – Magaalada Muqdisho ayaa waxaa xalay si rasmi ah uga bilaabmay baaritaan guri guri ah oo ay samaynayaan ciidamada amaanka Somalia.
Ciidamada Booliska ee dhawaan la geeyay degmada Warta Nabadda ayaa xalay baaritaan guri guri ah ka bilaabay xaafadaha Neeyshinka, Oorfane iyo Baariyow oo ka wada tirsan degmada Warta Nabadda.
Ha yeeshee, dad aannu la xiriirney oo ka mid ah shacabka Muqdisho ayaa hal arrin walaac ka qaba, taasoo ay codsadeen in laga gaarsiiyo DF Somalia, si aad looga feejignaado.
Arrintaasi waxay tahay inaysan dhanka ciidamada ka imaanin waxyaabo wax u dhimi kara kalsoonida shacabka iyo ciidamada oo meel hoose iminka joogta, sida in si khaldan loogu takri falo awoodda loo siiyay inay shacabka u shaqeeyaan, ama ay qaarkood farataysi kula kacaan dadka iyo guryaha ay baarayaan.
”Waxba qarsan mayno, in nala baarana waxba kama qabno, balse waxaan ka walaacsan nahay in dhib naga soo gaaro ciidamada laftooda.” ayay tiri hooyo magaceeda qarisay oo la hadashay Hadalsame.
DF Somalia ayaa haddaba looga fadhiyaa inay aad diiradda u saarto dishibiliinka, qiyamka, amaanada iyo isku hallaynta ciidamada ay u direeyso guryaha shacabka, taasoo hadba qaabkii ay u dhaqmaan ay dhisi doonto ama dumin doonto kalsooni iyo wada shaqayn dhex marta ciidamada iyo dadwaynaha, taasoo aad iyo aad muhim ugu ah sugitaanka amaanka.
Dadwaynaha ayaa marar badan ka sheegta amar ku taaglayn ka timaada ciidamada qaar oo aan lahayn habdhaqan ciidan, kuwaasoo mararka qaar xitaa dhac ama dil u gaysta shacabka.
Previous articleDAAWO: Ruushka oo soo bandhigay dayuurad ciidan oo nooca xamuulka ah (Duullimaadkii 1-aad oo ay samaysay)
Next articleKalfadhiga Aqalka Sare oo furmaya & MW Farmaajo oo khudbad ka jeedinaya + Sawirro